दशैँ सुरु, आज घटस्थापना | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
दशैँ सुरु, आज घटस्थापना
Published On : १ कार्तिक २०७७, शनिबार ०६:४५
नेपालीको महान् पर्व बडादशैँ आजदेखि सुरु भएको छ । घटस्थापनाको साइत आज बिहान ११ : ४६ बजे रहेको समितिले जनाएको छ ।
गोरखाको प्रसिद्ध धार्मीक स्थल गोरखकाली मन्दिर र मनकामनामा पनि वैद्धिक विधी अनुसार आज बिहान ११ः४६ मा जमरा राखिँदैछ । जमरा राख्न भगवतीलाई पुजा कोठामा आज बिहानै सारिसकिएको गोरखा दरबार हेरचाह अड्डाले जनाएको छ । साथै कोभिड १९ को प्रभावका कारण मन्दिर बन्द रहेकाले पुजारीले धार्मीक विधी अनुसार जमरा राख्ने र भक्तजनका लागि प्रवेशमा रोक लगाइएको अड्डा प्रमुख भुषालले बताए ।